Calvin Klein ingenye ekuholeni fashion design nokumaketha studios emhlabeni. Le brand ethandwa kuhlanganisa ezihlukahlukene imigqa umkhiqizo: izingubo, izesekeli, izicathulo, Izingubo zokulala, hosiery, amasokisi, sezimpahla zokubhukuda, amabhande, Eyewear, amawashi, imigexo, amajazi, amasudi, amakha, futhi ekhaya impahla. Omunye izesekeli ezibaluleke kakhulu futhi ethandwa kusukela Calvin Klein - ibhande eyenziwe 100% okuqotho.
Amabhande brand global
Umlando Calvin Klein fashion house elisuka ngonyaka ezikude 1968. Kusukela ngaleso sikhathi, i-brand kuye kwaba embonini fashion nenhle, design yangaba yinkimbinkimbi kwemikhiqizo kanye eminyakeni bazizuzela idumela siqinile umkhakha sibonga inhlanganisela avumelanayo umbono classic kanye zokudala imibono ezintsha. Abancane lanamuhla, ayindawo izakhamuzi zasemadolobheni, okuyinto ivame ukuba aesthetics bendabuko kanye Imigqa ehlanzekile. Ukuqamba kanye ukunakekela imininingwane kuboniswe kuyo yonke Calvin Klein brand khona. Esilima brand omhlaba Yenziwe okuqotho ingenye izinhlobo ezimbalwa izesekeli ezingaba empeleni uguqule ngokuphelele futhi wenze ngendlela ephelele.
ibhande zabesilisa Calvin Klein
Le nto luyingxenye obusebenzayo zifana nebhande, kumele kube nje kuphela stylish, kodwa futhi eliphezulu futhi enokwethenjelwa, akasoze alahlekelwa ukubukeka kwabo izothandwa kwezinkathi zonyaka eziningana. Ngu Calvin Klein ibhande izinga elingenakuqhathaniswa kuphela. Liyabonakala logo umklami uhlobo uphawu ubuqiniso. Ngenxa 100% okuqotho, zakudala bopha metal, isitayela yendabuko, elikhanyayo, kuphela yesimanje futhi ezihlukahlukene ongakhetha amabhande Calvin Klein zabesilisa kukhona choice ekahle ubani elifuna ukutshala imali accessory zakudala futhi uyisithelo esiyisimanga.
A ezahlukene onobuhle
Calvin Klein umise ngokwaso njengoba i brand yisakhiwo sodumo ukudalwa isitayela eyiqiniso abayitoho ehlanganisa design zakudala futhi zesimanje. Isikhumba ibhande Calvin Klein kungenziwa igqoke njengoba nesisekeli kwansuku, noma usebenzise ibhekwa njengoba ukuqedela isithombe Isakhiwo sakudala. Iyofika ngokuqinisekile ube makeweight ezimnandi kunoma ikhabethe. Smooth noma ribbed, ecwebezelayo noma matte ibhande imibala abakhethwe kahle futhi ifenisha elicwengiweyo kuyoba ofanele ukuba igqoke isambatho ibhizinisi, jeans noma ingubo yowesifazane futhi babe touch final kwetinhlavu indlela zikanokusho wesimanje. Ideal for zombili izikhathi loluhlelekile nalolungakahleleki.
Amabhande lwabesifazane ngo Calvin Klein: yemfashini
brand Isesekeli Calvin Klein abase bekhulile, okuqotho lesikhumba wayibhinca, iyathandwa ngokulinganayo phakathi kokubili amadoda nabesifazane. Nayo ungakwazi ngempumelelo ukugqamisa ubuhle egoba okhalweni okhalweni, ehlukahlukene esithombeni okuyisidina, wengeza nokugqamisa elikhanyayo. Kubalulekile futhi ukuthi le ngxenye obonakala ulula wezigqoko, bakwazi ukuguqula isiphi isambatho ngaphezu ukuqashelwa, okwenza kube mnandi futhi yesimanje.
Fashion mkhuba isizini ezayo 2016 kukhona abesifazane amabhande e ithoni kanye, futhi njengoba impahla ingasetshenziswa hhayi kuphela isikhumba kodwa futhi ukuthungwa eduze imvunulo Indwangu. Enye eseyintsha - wayibhinca double nge isizinda ezibanzi ibhande ezacile, kanye izinto zenziwa kuyiphi, ingahluka njengoba umthunzi kanye ukuthungwa. emapheshana aluka, lesikhumba ifaka noma insimbi amaketanga kungenziwa wanezela. Ethandwa kakhulu kukhona ezizibeni nge enamathela metallic, lwenziwa ezihlukahlukene imibala.
Njengomthetho, kukhona ezahlukene Ukukhetha isesekeli ezifanele kungaba umsebenzi onzima. Council ochwepheshe - khetha kuphela lama-brand ukuthi zaziwa izinga azo amakhulu UKUQINA imikhiqizo. Enye yalezi brand, kanye Hugo Boss, Udizili, Lacoste, Armani nabanye, kukhona ibhande Calvin Klein. Lezi abakhiqizi ukukhiqiza yekhwalithi ephezulu izesekeli stylish. Ngokwemvelo, intengo yokuqala brand amabhande lizophakama, kodwa kokuthenga esitolo kuhloliwe, umthengi uyoba 100% ukuthi le nto obusebenzayo ngeke uyikhonze ngokwethembeka isikhathi eside, futhi namanje babe ukubukeka lemukelekako.
Original noma umkhohlisi?
Ingabe ikhona indlela isivikelo izimpahla esingalungile? Indlela ukuhlukanisa bangempela umklami Calvin Klein into kusuka inkohliso? Okokuqala, kubalulekile ukuba izindleko zaso. Lokhu ibhande uphawu akusoze ezishibhile. Okwesibili, umkhiqizo kufanele kungabi ukukhubazeka ebonakalayo, ezivuzayo engalingani, imihuzuko noma ezinye umonakalo. Ngakho-ke, ukuthenga engcono kwenziwe ezitolo okudayisa noma kumawebhusayithi omethembayo.
Amanzi isicupho iwayini: inhloso kanye kudivayisi
Osikilidi Electronic Eleaf: amanani ezingabizi, futhi uhlelo yasekuqaleni
Baby namakalishi ngoba twins: izinzuzo kanye nobuthakathaka
Izidingo zesistimu GTA 5. GTA 5: izimfuneko PC
Meatballs ka decoys, noma kanjani ukupheka ukudla kwasekuseni okumnandi futhi eqotho
Umbhoshongo esiphezulu eMoscow Kremlin. Incazelo eMoscow ezibiyele kwemibhoshongo